Xargaha xargaha xargaha oo leh qalab iyo qaybo gaar ah ayaa la dalban karaa, lagu rakibi karaa dusha sare, jaranjarada waxaa lagu rakibi karaa xagal. Milkiilayaasha guryaha DIY, way u fududahay in lagu rakibo nidaamka taayirrada fiilada ee sagxadda ama jaranjarada. Fiiladu waxay qaadataa hannaanka daboolidda budada ee horseedka u ah warshadaha, kaas oo ah xayndaabka xadhigga siligga ee ugu habboon mashaariicdaada gudaha ama dibaddaba.
Taleefanka fiilada waa nidaam dhinacyo badan leh oo leh daraasiin ikhtiyaar oo la beddeli karo. Haddii mashruucaagu ku yaallo xeebta, fadlan dalbo biraha dibedda ee caadada u ah si aad uga hortagto daxalka. Qoraallada taayirrada fiilada waxaa lagu rakibi karaa meelo badan oo kala duwan, sida alwaax, isku -darka, shubka, iwm.
Waxaa jira laba nooc oo tiirarkeenna birta ah: 304 birta birta ah, 316 birta birta ah.
304 ayaa ku habboon inta badan nidaamyada tareenka. Waa mid waarta oo leh muuqaal qurxoon oo qurux badan. 316 wuxuu aad ugu habboon yahay deegaannada xeebta ah maxaa yeelay siligga balakoonka ee birta ah ee birta ah wuxuu u adkeysan karaa dhowr sano sagxad kasta oo badda soo jeedda.
Dhammaan fiilooyinka fiilooyinka fiilooyinka iyo qaybaha waxay ka samaysan yihiin bir bir ah. Haddii aad u baahan tahay jaban, waxaan sidoo kale ku siin karnaa bir kaarboon.
Ilaha rakibaadda DIY
Nidaamkeena tareenka fiilada wuxuu u hoggaansamaa tilmaamaha waana sahlan tahay in la rakibo. Kaliya waxaan u baahanahay inaan hagaajinno boolal. Ku dhiiri geli inaad dhex gasho qaar ka mid ah mashaariicdan xadhkaha fiilooyinka, ka dibna akhri tusaheena tallaabo-tallaabo ee sida loo rakibo taayirrada fiilada.
Qiimaha nidaamka taleefoonkaaga fiilada waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee tareenka aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaystirka ee aad doorato.
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamka birahaaga fiilada ayaa wax -soo -saar ka sameeya warshaddeenna Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad samaynta dhalooyinka si aan u awoodno inaan soo saarno qayb kasta oo jaranjaradaada ah.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Qaybaha birta ayaa la gooyaa dhererka saxda ah ee aad u baahan tahay. Waxaan awoodnaa inaan si sax ah u saxno sababta oo ah waxaan xakameynaa hannaanka injineernimada ee nidaamka oo dhan, waxayna ka dhigaysaa habka rakibidda shaqo isku -dhafan oo fudud.
Marka nidaamkaaga tareenka la been abuuro, waxaan ku rari doonaa sawir tilmaanta rakibidda oo waxaan ku bixin doonaa tilmaamaha rakibidda onlayn. Badeecadeenu waa fududahay rakibidda DIY oo inta badan aan loo baahnayn alxanka. Inta badan mashaariicda waxaa lagu dhammayn karaa maalmo yar gudahood.
Hore: Nidaamka Taleefanka Birta ee Bir -La'aanta ee Balakoonka
Xiga: Terrace Aluminum Frameless U Channel Base Glass Railing
Taayirada Cable ahama
Sileing Steel Deck
Naqshadeynta Railing ahama
Jaranjarada Railing ahama